तलव भीख होइन, बौद्धिक श्रमको मूल्य हो (तलव बढाउनैपर्ने १६ कारण) – Lokpati.com
काठमाडौं, वैशाख। सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्ययले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने मतसहित १६ तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘त्यत्रो समय र लगानी खर्च गरेर देश विदेशमा वर्षौं लगाएर घुँडा धसेर १६/१६ वर्ष पढेर, तालिम लिएर, गाउँगाउँ कुना कन्दरामा बसेर, घर परिवार त्यागेर, अध्ययन सकिएपछि लोकसेवा लड्दै पास गरेर सुरु गरेको सरकारी जागिरमा के छन् त सुबिधाहरु ?’
बस्नलाई राम्रो डेरा छैन। बालबच्चा पढाउन राम्रो स्कूल छैन। खेल्ने मनोरञ्जन गर्ने कुनै साधन छैन। कुनै पुस्तकालय छैन, पत्रिका छैन। टेलिफोन इन्टरनेट, टिभी छैन। मोटरचल्ने सडक छै। न गाडी छ, न अस्पताल डाक्टर छ। इमर्जेन्सी परेर रोगले च्याप्यो भने राम भरोसे हुनुपर्छ। कर्मचारीले पनि यस्तैयस्तै समस्या भोगेका छन्।
मैले इन्जिनियरको जागिर ०४३ सालमा सुरू गर्दा एक हजार तीनसय रुपैंया मेरो तलब थियो त्यतिबेला, करिव यो एकसय डलर बराबर हुन्थ्यो त्यो पैसाले आधा तोला सुन आउँथ्यो। झण्डै तीस वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको सचिव भएर जागिर छोड्दा रू ५१ हजार तलब बुझें, यो ५०० डलर बराबर र १२ आना सुन किन्नसम्म पुग्छ। जागिर सुरू गर्दा एक्लो थिए, जागिरको अन्तिमतिर हुर्केका परिवार चार जनाको भयो।
नेपालको विकट भूगोल र असुविधामा न्युन तलबको सरकारी जागिर खानु दुस्साहससरह नै लाग्छ। मलाई अहिले सम्झदा, जाजरकोट, डोटी, बैतडी, गुल्मी त्यो बेलाको, तर अचम्म लाग्छ, म कसरी टिकेछु जागिरमा, यही मुलुकमा, आजसम्म पनि कसरी टिक्न सकें ? फर्केर हेर्दा आफैलाई अचम्म लाग्छ घरिघरी। अलिकति नयाँ पुस्ताको नजरबाट नेपाल सरकारको तलवलाई हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले गर्ने साधारण पकेट खर्चजस्तो देखिन्छ यहॉको सरकारी तलव।
मेरा दौंतरी ब्रिलियन्ट साथीहरू अधिकांश विदेश पलायन भए, मलाई पनि उकास्थे विदेश आउन तर के भयो के, गइएन। यही लडन्त भीडन्त गरियो। के गरियो, गर्न सकियो वा सकिएन वा गरिएन, अहिले मतलब पनि छैन। सन्तुष्ट नै छु आजका दिनमा। मेरो नजरमा जे कुरा राष्ट्रसेवा थियो त्यो मैले गरें। देश सेवालाई पारिश्रमिकसँग तुलना गरिएन अथवा थोरै पारिश्रमिकमा पनि कर्तव्यबोधको कारणले गर्दा चित्त बुझाइयो अथवा यस्तै केही भयो।
तर दुख लाग्छ, आफ्नै बालबच्चा नेपाल बस्न योग्य हुन छाडेको छ, नयाँ पुस्ता सरकारी जागिरमा आकर्षण देख्दैनन्। विदेशमा मनग्यै अवसर देख्छन् किनभने नेपाल बस्नु पेशा होइन, त्याग मानिन्छ। जीवनभरि इमान्दार बनेर अन्तिममा भीखमंगा सरह हुनुपर्छ, न आफ्नो न परिवारको भरणपोषण गर्न सकिन्छ, न अवकाशपछिको जिन्दगीलाई सुरक्षित नै पार्न सकिन्छ। जागिरे भनेको कुनै सामाजिक इज्जत नभएको सन्यासी र जोगीजस्ता निरीह देखिदै गइरहेका छन् नयाँ पुस्ताका नजरमा।
तर अहिलेका पुस्ताको सोच छ, त्याग गर्न नपरेसम्म किन त्याग गर्ने ? के कालागि गर्ने ? भन्ने भनाइ पनि सही नै हो। नयाँ सोचले नयाँ पुस्ताको जीवनस्तर पनि नयाँखाले नै बनाएको । उनीहरु छातीमा ठूलो देशप्रेम बोकेर बिदेशिएका छन्। देशको सम्झना गर्दै स्तरीय कमाई गरेका छन्। केही युवाहरु पछुताएका पनि होलान्, देशभित्रै केही गर्न सकिएन भनेर तर जति पलायन भएका छन्, ती व्यक्तिहरु प्राय सन्तुष्ट छन्।
भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ। कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ। तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ। यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो। तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागू गर्नुपर्छ। तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा होइन, बौद्धिक पारिश्रमिकका रुपमा लिइनुपर्छ।
Tagsकर्मचारी तलव स्केल नेपाल सरकार
भेला तथा बैठक नगर्न प्रशासनको निर्देशन, नटेर्ने ७७३ कारबाहीमा
उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट
बारामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा
पाइलट विजय लामा निलम्वित
लोकसेवाले माग्यो कर्मचारी : कुन समूहमा कति ?